Redesign Weebụsaịtị: Usoro iji mepụta ntụgharị weebụsaịtị Weebụ | Martech Zone
Redesign Weebụsaịtị: Usoro iji mepụta mgbanwe weebụsaịtị ọzọ
Fraịdee, Nọvemba 16, 2018 Fraịdee, Nọvemba 16, 2018 Ashley Marsh
You malitere ịmalite azụmahịa ma na-arọ nrọ na ị ga-enwe ọsọ ọsọ ọsọ? Agbanyeghị, ịnwe echiche dị mma yana ngwaahịa kacha mma ezughi ezu maka ndị ahịa ịbanye. Ọ bụrụ na akara gị na-eru ole na ole ma ị na-adabere n'okwu ọnụ maka ọganiihu gị, nke ahụ ga-ewe afọ iri maka inwe ọdịnihu dị mma .
Ebe nrụọrụ weebụ iji bulie Ahịa nke Azụmaahịa gị
Na ụwa nke teknụzụ, ịchụpụ ọtụtụ puku afọ mkpokọta weebụsaịtị dị mkpa. Nke a abughi nani na inye aka n’iche ahia ahia gi n’enyekwa ndi ahia uru.
Gini mere ichere otutu oge ka onye ahia rute ulo oru gi, mgbe inwere ike inwe otutu oge? Lọ ọrụ webụsaịtị anaghị akwụ ụgwọ nke ukwuu, maka nchegbu gị kama ọ ga-emerịrị azụmaahịa gị dị elu. Site na ebe nrụọrụ weebụ mepụtara nke ọma, ị nwere ike ịchọta ahịa niche gị. Ya mere, anyị ga-ekerịta ụfọdụ uru nke atụmatụ Weebụ nke ga-akwalite azụmahịa gị.
Oge & Ike nchekwa: Igosiputa ngwa ahia gi nye onye ahia gi ma hapu na ereghi ya bu nnukwu mmechuihu. Iwulite websaịtị nke gị ga - enyere ndị ahịa aka ịlele ngwaahịa a ma debe iwu ahụ n’enweghị nsogbu ọ bụla.
Ghọta akara gị: Iwulite webusaiti ga enyere aka iru ahia gi nye otutu ndi ahia. Ọzọkwa, ndị ọhụụ ọhụrụ, yana ego ị na-enye ndị ahịa, enwere ike igosipụta.
Ọkara iji jide ndị ahịa ọzọ: An mara mma weebụsaịtị ga-enweta ihe okporo ụzọ. Ebe nrụọrụ weebụ di omimi na-enyere aka ntughari na ikwesiri ntụkwasị obi maka azụmahịa gị. Ndị ahịa ga-enwe ike ịlele ọkwa adịchaghị na mmelite na-agba mbọ ịdị mkpa azụmaahịa gị.
Ozi gbasara ngwaahịa gị: You ga-adị nkenke dị ka nke ọma dị ka kpọmkwem na ihe ị na-ere. Ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa enweghị ike ijikọ gị, mgbe ahụ ọ nwere ike ịlaghachi azụ. Kwado mmekọrịta onye ọrụ na ịgbakwunye akaebe nwere ike ịbụ nnukwu enyemaka maka azụmaahịa gị.
Gbakwunye azịza teknụzụ dị iche iche na azụmaahịa gị ga-egosi ndị ahịa nwere ike, ịdị mkpa nke ọrụ gị. Ya mere, iji detụ ụtọ ihe ịga nke ọma, ị ga-enwerịrị websaịtị nke ọma. Nwere ike ijikwa ebe nrụọrụ weebụ gị ma nwee ike ịkwaga na websaịtị dị iche iche n'oge ọ bụla na-enweghị ọdịnaya gị.
Mgbasa Ozi ga - enyere gị aka ịmalite azụmahịa gị ngwa ngwa, mana enwere ole na ole, ndị na - arụ ọrụ Weebụ enweghị ike ijikwa mepụta ọtụtụ okporo ụzọ. Agbanyeghị, stats na-ekwu na 88% nke ndị ọrụ agaghị ejigide weebụsaịtị gị mgbe ahụmịhe ọjọọ gasịrị. Nke a nwere ike na-eme, ọ bụrụ na ị na-agba otu weebụsaịtị oge ochie. Dị ka na-agbanwe agbanwe na ọnọdụ weebụsaịtị na-achọ redesigning maka dijitalụ conversions.
Gịnị Mere O Ji Dị Mkpa Ka E Nweghachi weebụsaịtị?
Anyị na-ewu weebụsaịtị iji nweta ntụkwasị obi na iji nwetakwu ego. Ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike na-arụ ọrụ nke ọma, mana iji nye onye ọrụ ahụ ezigbo ahụmịhe ma mee ka ha laghachite ịkwesịrị imelite weebụsaịtị gị. Inye izi ezi gị, na akaebe bụ ụzọ dị mma iji kee ndị ọrụ kwesịrị ntụkwasị obi na weebụsaịtị gị. Anyị ga-ekekọrịta ụfọdụ stats na-emetụta uche, na mkpa ka ị mara maka mgbanwe ntanetị:
Site na asọmpi na-arị elu, azụmahịa 83% abaara uru na weebụsaịtị karịa ndị na-enweghị otu.
Site na Redesigning Weebụ, 40% Obere azụmaahịa azụmaahịa emela ka ahụmịhe ndị ahịa.
Iji mepụta ndu ndị ọzọ, ụlọ ọrụ 72% na-etinye atụmatụ ahịa iji gbakọọ ROI (Return On Investment) na-anata 1.6 ugboro karịa kwantum.
SLA (Nkwekọrịta Ọrụ Ọkwa) bụ usoro ahịa kachasị dị irè maka weebụsaịtị gị nke 85% nke ụlọ ọrụ kwadoro.
Na-agbakwunye ọdịnaya mmekọrịta, vidiyo na peeji nke ọdịda nke weebụsaịtị gị n'oge ntụgharị ya ga-abawanye ndu site na 86%.
Ileghara ụfọdụ akụkụ na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike imetụta ọgbọ okporo ụzọ gị, na ị ga-ege ntị. Chọta weebụsaịtị gị site n'oge ruo n'oge, ịlele njikọ ndị gbajiri agbaji na ibugharị peeji nke dị n'akụkụ aka nri nwere ike ịgbatị ogologo oge ụlọ ọrụ ahụ.
Ebumnuche nke Ga-akpali iji toghagharịa weebụsaịtị
Maka Mgbanwe Dijitalụ, atụmatụ ịzụ ahịa na-arụ ọrụ dị mkpa. Ebe ọ bụ na, òtù niile na-arụ ọrụ na ebumnuche nke ịmepụta ahịa, na-eduga mgbanwe. Imelite weebụsaịtị na ngwa teknụzụ kachasị ọhụrụ ga-eme ka weebụsaịtị gị dị ike n'okike. Mmekọrịta ndị ahịa ga - enyere gị aka ịghọta olulu ndị ahụ iji meziwanye weebụsaịtị gị site na ịnakọta nzaghachi. Chịkọta data nke onye ọrụ chọrọ na ijikọta atụmatụ ọhụrụ nwere ike inyere aka nweta ezigbo akara. Ya mere, ị nwere ike chọpụta ezigbo ihe kpatara ị chọrọ iji weghachite weebụsaịtị gị.
Na-echekwa ndị ọrụ:
Mgbe ị nyere onye ọrụ ihe ọmụma ọ bụla ọ na-achọ na nhazi mara mma ị nwere ike ijide ndị ọrụ. Ọzọkwa site na ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị, ngwa ngwa ga-enwe UX ka mma na-emepụta ntụgharị.
Ojiji na Nzipụta nke Brand:
Gịnị ma ọ bụrụ na ịmepụta weebụsaịtị nke na-enweghị ike ịkwado ọrụ ị na-enye ndị ọrụ? Mgbe ị kwadoro mkpa ndị ọrụ na ebumnuche dị iche iche ma nye ha ohere ịnweta weebụsaịtị ahụ, ị ​​ga-enweta nzaghachi ngwa ngwa.
Dakọtara na Ngwaọrụ Weebụ Ọhụrụ:
Tinye atụmatụ na ngwaọrụ ọhụrụ na weebụsaịtị gị ezughị. Iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ, ọ dị mkpa ịnweta njikọta na ngwanrọ mpụga. Anyị ga-achọ weebụsaịtị nke nwere ike ịhazi na teknụzụ kachasị ọhụrụ nke na-enyere aka ịmepụta, jikwaa ma nwalee data.
Mgbanwe Dijitalụ na Mgbanwe:
Na-etinye CRM ngwá ọrụ iji gbanwee weebụsaịtị gị site na imeziwanye arụmọrụ ya. Izere iji ọtụtụ mgbasa ozi gbasaa, na-agbakwunye blọọgụ na-enye ihe ọmụma na isiokwu na-emepụta echiche dị mma na ihe kpatara ijide weebụsaịtị gị.
Iblenweta na PC na mobile mfe:
You mara, iji nweta ịntanetị otu ụzọ n'ụzọ atọ na-eji smartphones? Ya mere, ha na-ahọrọ weebụsaịtị nke enwere ike ịnweta ebe ọ bụla na ngwaọrụ ọ bụla. Gị na ebe nrụọrụ weebụ ga-mobile kachasị maka onye ọrụ iji nweta ozi seamlessly.
Chọ inwe ọganihu dị ogologo na azụmaahịa dị n'ịntanetị ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ị na-emelite weebụsaịtị gị. Meju weebụsaịtị gị na atụmatụ ọhụrụ na ịnwale echiche, ijikọ ngwaọrụ, idobe ihe onye ọrụ chọrọ n'ihu uche ga-enyere aka ịgbanwe. Mmekọrịta ndị ahịa ga-eme ka mmepe weebụsaịtị yana azụmaahịa gị n'ịntanetị na -emepụta ọtụtụ ụzọ.
Tags: developmentWeb mmepenhazi weebụusoro okike webusaiti
Ashley Marsh bụ Senior- Afọ edemede na Maan Softwares Inc. Ya na ụlọ ọrụ a anọwo afọ anọ gara aga. Ọ bụ ọkachamara na ụdị edemede teknụzụ kachasị na mmepe mkpanaka, ntanetị weebụ, na, teknụzụ kachasị ọhụrụ. Dịka ya si kwuo, ọ bụụrụ ya nnukwu ihe ngosi dịka ụbọchị ọ bụla teknụzụ na-emelite onwe ya na-eweta echiche ọhụrụ na-eme ka ọ dị ọhụrụ kwa ụbọchị.